Njirimara nke Fresh Air Disinfection Box System
(1) Inactivation zuru oke
Gbuo nje n'ikuku n'ime obere oge, na-ebelata ohere izigara nje.
(2) Ebumnuche zuru ezu
A na-emepụta ion ion dị ọcha dị iche iche ma wepụta ya na mbara igwe niile, na mmetọ dị iche iche na-emerụ ahụ na-arụsi ọrụ ike, nke na-arụ ọrụ nke ọma na nke zuru oke.
(3) Mmetọ efu
Enweghị mmetọ nke abụọ na mkpọtụ efu.
(4) Pụrụ ịdabere na adaba
(5) qualitydị elu dị elu, ntinye ngwa ngwa na ndozi
Ngwa: ụlọ obibi, obere ọfịs, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ na ebe ndị ọzọ.
Iwuli ikuku dị elu na-arụ ọrụ dị oke mkpa maka ọdịmma anyị niile n'ihi oge anyị na-etinye n'ime ụlọ (~ 90%) na ikike nke ụlọ iji mee ka nghọta anyị, ahụike, arụpụta ihe na ụra anyị, na-adịghị mma. bụ ihe kachasị mkpa nke na-eme ka ikuku ụlọ dị mma.
Na 2020, n'ihi ntiwapụ nke Covid-19 n'ụwa niile, ndị mmadụ na-echekwu banyere ogo nke ikuku ọhụrụ. Maka nke ahụ, anyị mepụtara ngwaahịa ọhụrụ na UVC light & medical photocatalytic filter iji gbuo nje / nje na ikuku ọhụrụ, wee weta ikuku ọhụrụ & ahụike nye ndị mmadụ n'ime ụlọ, nke a na-ejikarị n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, sinima, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, wdg.
Njirimara nke Sistemu a
Olee otú Igbe Ọhụrụ Disinfection Box Si Arụ Ọrụ
* Standard Model kenha na ọkọlọtọ ERV ngwaahịa
* Ngwaahia Model kenha na ducted FCU & AHU
Standard Fresh ikuku disinfection Igbe
Piping Schematic Standard Ọhụrụ ikuku disinfection Box
Nkwupụta nrụpụta Germicidal
Nke gara aga: In-Room nkenke Air conditioner (Link-Wind Series)
Osote: Ihe nhicha ikuku na arụ ọrụ disinfection
Arụ Ọrụ Ikuku dị ọcha
Single Way ikuku mmiri Fresh Air Filtration Systems